Amagqwetha abucala oMhlaba wonke eNetherlands - Law & More
Ubumfihlo lilungelo elisisiseko kwaye ivumela abantu kunye neenkampani ukuba zilawule idatha yazo. Ngenxa yokwanda kwemithetho yaseYurophu kunye neyelizwe kunye nemimiselo kunye nolawulo olungqongqo ekuthobeleni abaphathi, iinkampani kunye namaziko akunakuwutyeshela umthetho wabucala kule mihla. Owona mzekelo waziwayo womthetho kunye nemigaqo ekufuneka ithotyelwe yinkampani nganye okanye iziko ngokubanzi yi-General Data Protection Regulation (GDPR)…
NDIFUNA NAMANYE UMTHETHO WOKUQESHWA?
Imfihlo lilungelo elisisiseko kwaye ivumela abantu kunye neenkampani ukuba zilawule idatha yazo.
> Uluhlu lwesicelo kunye nokubekwa esweni
> Uluhlu lweempahla kunye nomgaqo-nkqubo wabucala
> Umgaqo-nkqubo woKhuseleko loLwazi jikelele (GDPR)
Ngenxa yokwanda kwemithetho kunye nemigaqo yaseYurophu kunye nakwilizwe kunye nemigaqo engqongqo yokuthotyelwa kwabaphetheyo, iinkampani kunye namaziko akunakuba lula ukuwuhoya umthetho wabucala kule mihla. Umzekelo owaziwa kakhulu womthetho kunye nemigaqo ukuba phantse zonke iinkampani okanye iziko kufuneka zihambisane neMigaqo yoKhuseleko lweNkcukacha ngokuBanzi (GDPR) ongene kuyo kwi-EU iphela. ENetherlands, imithetho eyongezelelweyo ibekwe phantsi komthetho wokuphunyezwa kwe-GDPR (UAVG). Isiseko se-GDPR kunye ne-UAVG lilele kwinto yokuba inkampani nganye okanye iziko ngalinye elisebenzisa idatha yobuqu kufuneka iphathe le datha yobuqu ngononophelo nangokungafihlisiyo.
Nangona ukwenza inkampani yakho ye-GDPR-proof kubaluleke kakhulu, kodwa isemthethweni. Nokuba ichaphazela idatha yabathengi, idatha yabasebenzi okanye idatha evela kubantu besithathu, i-GDPR ibeka iimfuno ezingqongqo ngokubhekisele ekusebenzeni kwedatha yobuqu kwaye iqinisa namalungelo abantu abathe idatha idluliselwe. Law & More amagqwetha azi konke ukuphuculwa komthetho wobumfihlo. Amagqwetha ethu aya kujonga kwindlela oyisingatha ngayo idatha yakho kunye neemephu zangaphakathi kwiinkqubo zakho zangaphakathi kunye nokulungiswa kwedatha. Abameli bethu bakwakhangela ukuba inkampani yakho yenziwe kangakanani na ngokomthetho we-AVG ofanelekileyo nokuba loluphi na utshintsho olunokubakho. Ngale ndlela, Law & More iyavuya ukukunceda wenze kwaye ugcine umbutho wakho-ubungqina be-GDPR.
Ngokwaziswa kwe-AVG, imithetho iqinisiwe. Ngaba inkampani yakho ilungiselelwe oku?
IGosa loKhuseleko lweDatha
Sikunceda uqeshe iGosa loKhuseleko lweDatha
Uvavanyo lwempembelelo yoKhuseleko lweDatha
Singaluqhuba uhlalutyo lokuchonga umngcipheko onxulumene nokusebenza kwedatha
Yeyiphi idatha eyenziwa yinkampani yakho? Ngaba iyasebenza kwi-AVG? Sikule nkonzo yakho
“Ngexesha lokwazisa oko
kwangoko yacaca kum
ukuba Law & More Unayo
isicwangciso esicacileyo sokusebenza ”
Uluhlu lwesicelo kunye nokubekwa esweni
I-GDPR isebenza kuyo yonke imibutho eqhuba idatha yobuqu. Xa inkampani yakho iqokelela idatha umntu anokuchongwa kuyo, inkampani yakho inento yokwenza ne-GDPR. Ngapha koko, idatha yobuqu iyenziwa xa, umzekelo, ulawulo lwentlawulo yabasebenzi bakho lugcinwa, ukuqeshwa kwabathengi kubhalisiwe okanye xa kuchazwe idatha kukhathalelo lwempilo. Unokucinga kwakhona ngezi meko zilandelayo: ukuqhuba imisebenzi yentengiso okanye ukulinganisa okanye ukubhalisa imveliso yabasebenzi okanye ukusetyenziswa kwekhompyuter. Ngenxa yoku kungasentla, akunakulindeka ukuba inkampani yakho ijongane nomthetho wabucala.
ENetherlands, umgaqo osisiseko kukuba umntu kufuneka akwazi ukuxhomekeka kwiinkampani kunye namaziko ukuphatha idatha yabo ngononophelo. Emva kwayo yonke loo nto, kuluntu lwethu lwangoku, ukwenziwa kweedijithali kudlala indima ebalulekileyo kwaye kubandakanya ukuhambisa idatha kwifom yedijithali. Oku kungakhokelela kwimingcipheko emandla malunga nokukhusela ubumfihlo bethu. Yiyo loo nto umphathi wabucala waseDatshi, uGunyaziwe woKhuseleko lweDatha (D), enamandla okufikelela kunye namandla okunyanzeliswa. Ukuba inkampani yakho ayihambelani nomthetho we-GDPR osebenzayo, iya kubeka emngciphekweni ngokukhawuleza umyalelo wokuxhomekeka kwintlawulo yesohlwayo sexesha elithile okanye intlawulo enkulu, enokuthi ifike kwi-euro engama-XNUMX ezigidi. Ukongeza, kwimeko yokusetyenziswa ngokungakhathali kwedatha yobuqu, inkampani yakho kufuneka ithathele ingqalelo ukubonakala okubi okungalunganga kunye nezenzo zembuyekezo ngamaxhoba.
Uluhlu lweempahla kunye nomgaqo-nkqubo wabucala
Ukuthintela iziphumo ezifikelela kude okanye amanyathelo asisuphavayiza, kubalulekile ukuba inkampani okanye amaziko akho abenomgaqo-nkqubo wabucala ukuze ahambisane ne-GDPR. Ngaphambi kokuqulunqa umgaqo-nkqubo wabucala, kubalulekile ukuqokelela indlela inkampani okanye iziko lakho eliqhuba ngayo kwimeko yabucala. Kungako kunjalo Law & More Uqulunqe isicwangciso sinyathelo ngamanyathelo alandelayo:
• Inyathelo 1: Chonga ukuba yeyiphi na idatha yobuqu oyicubungula
• Inyathelo 2: Ukuchonga injongo kunye nesiseko sokusebenza kwedatha
• Inyathelo 3: Fumana indlela aqinisekiswe ngayo amalungelo ezifundo zedatha
• Inyathelo 4: Vavanya ukuba uyenza kwaye uyicela njani na, kwaye uyayibhalisa na
• Inyathelo 5: Fumana ukuba unyanzelekile na ukwenza uVavanyo lweNkozo yoKhuseleko lweDatha
• Inyathelo 6: Fumana isigqibo sokutyumba iGosa loKhuselo lweDatha
• Inyathelo 7: Fumana indlela inkampani yakho esebenza ngayo ukuvuza kwedatha kunye noxanduva lokunika ingxelo
• Inyathelo 8: Jonga izivumelwano zakho zomqhubekekisi
• Inyathelo 9: Thatha isigqibo sokuba yeyiphi na isuphavayiza yombutho wakho owela phantsi kwayo
Xa uwenzile olu hlaziyo, kunokwenzeka ukwazi ukumisela ukuba yeyiphi na imingcipheko yokwaphulwa kwemithetho yabucala efumaneka ngaphakathi kwinkampani yakho. Oku kunokuqikelelwa kumgaqo-nkqubo wakho wabucala. Ngaba ujonga inkxaso kule nkqubo? Nceda unxibelelane Law & More. Amagqwetha ethu ziingcali kwicandelo lomthetho wabucala kwaye anokunceda inkampani okanye iziko lakho ngezi nkonzo zilandelayo:
Ukucebisa kunye nokuphendula imibuzo yakho esemthethweni: umzekelo, kunini xa kukho ukophulwa kwedatha kwaye uhlangabezana njani nayo?
• Ukuphononongwa kolungiso lwedatha yakho kwisiseko seenjongo kunye nemigaqo ye-GDPR kunye nokumisela umngcipheko othile: Ngaba inkampani okanye iziko lakho liyahambelana neGDPR kwaye ngawaphi amanyathelo asemthethweni ekufuneka usawathatha?
Ukulungiselela kunye nokuphononongwa kwamaxwebhu, anjengomgaqo-nkqubo wakho wabucala okanye izivumelwano zeprosesa.
Ukuqhutywa koVavanyo lweMpembelelo kuKhuseleko lweDatha.
Ukuncedisa kwiinkqubo zomthetho kunye neenkqubo zonyanzeliso yi-AP.
Umgaqo-nkqubo woKhuseleko loLwazi jikelele (GDPR)
Ukukhuselwa kwamalungelo obumfihlo kuya kusiba yinto ebalulekileyo kuluntu lwethu lwangoku. Oku kungabangelwa yinxalenye enkulu yedijithali, uphuhliso apho ulwazi luhlala luqhutywa ngedijithali. Ngelishwa, ukwenziwa kwedijithali kukwafaka umngcipheko. Ukukhusela ubumfihlo bethu, kusekwe imigaqo yabucala.
Okwangoku, umthetho wabucala uphantsi kwenguqu ebalulekileyo evela ekuphunyezweni kwe-GDPR. Ngokusekwa kwe-GDPR, yonke imanyano yaseYurophu iya kuba phantsi komthetho wabucala. Oku kuchaphazela kakhulu amashishini, kuba kuya kufuneka ajongane neemfuno ezingqongqo eziphathelele kukhuseleko lwedatha. I-GDPR iphucula isikhundla sezifundo zedatha ngokubanika amalungelo amatsha kunye nokomeleza amalungelo abo. Ngapha koko, imibutho elungiselela idatha yobuqu iya kuba noxanduva olungaphezulu. Kubalulekile ukuba amaziko alungiselele olu tshintsho, ngakumbi ngakumbi izohlwayo zokungathobeli iGDPR nayo iya kuba nzima.
Ngaba ufuna ingcebiso malunga nenguqu kwi-GDPR? Ngaba uyafuna ukwenza itsheki yokuthobela eyenziwe, ukuqinisekisa ukuba inkampani yakho iyathobelana neemfuno ezivela kwi-GDPR? Okanye ngaba ukhathazekile ngokukhuseleka kweenkcukacha zakho azonelanga? Law & More Unolwazi oluphangaleleyo malunga nomthetho wabucala kwaye uyakukunceda uyile umbutho wakho ngendlela ehambelana ne-GDPR.